Waxa Hadda ka Socdo Degmada SPPS - June 4, 2020
Caddaalad ha helo George Floyd
Bulshada Saint Paul Public Schools waxay ka murugeysan tahay dilkii xaq-darrada ahaa ee George Floyd ee Minneapolis maalinkii May 25, 2020. Xubnaha bulshada, deriska, iyo ardayda iyo shaqaalaha SPPS ayaa magaalada isaga kala yimid si ay ixtiraam ugu muujiyaan, si adagna u muujiyaan inaysan aaminsaneyn rabshado, takoorid, iyo cabburis nooc walba leh.
Degmada SPPS ahaan, waxaynu garab taagannahay oo taageeraynaa ardaydeenna, shaqaalaheenna, iyo bulshadeennaba annaga oo doonayno caddaalad ka dhacdo magaaladeenna iyo meelo kaleba. Waxaad kelmaddii Superintendent Joe Gothard ka akhrisan kartaa halkaan: Superintendent Joe Gothard's remarks.
Macluumaad loogu talogalay Qoysaska
Iskoollo badan iyo macallimiin badan ayaa qabtay wadahadallo iyo hawlo lagu caawinayo inay ardaydu wax un ka fahanto dilkii George Floyd iyo saf-marka COVID-19. Waxaynu isku soo ururinnay macluumaad ay qoysasku u isticmaali karaan caawinta caruurtooda xilligan lagu jiro marxalado adag.
Sida ay Qoysasku u Caawin karaan Ardayda
Qoysaska iyo iskoolladaba waxay caawin karaan caruurta iyaga oo siinayo ammaan, niyad-dejin u sameynayo wakhtiga adag, iyo inay ardaydu arkaan in la xurmeynayo.
In caruurta loo sameeyo jadwal si joogto ah ku socdo wuxuu ka caawiyaa inay dareemaan ammaan. Isku day inaad caruurtaada la joogtid oo aad u abuurtid jadwal ay la qabsadeen oo ay saadaalin karaan.
Dadka waaweyn ee u turo caruurta, kana ag dhow, waxay taasi da’ yarta siisaa deggenaansho wakhtiyada adag. Caruurta way ka faa’iidi karaan markay arkaan dadka waaweyn iyagoo helo kalsooni iyo rajo.
In la arko
Dhageyso cunuggaaga oo fahan haddii iyo markii ay dareemayaan wax dhibayo, ama markii ay isbeddesho qaabka ay u dhaqmayaan. Xurmee waxa ay kuu sheegayaan iyo shucuurtoodaba.
Mararka qaarkood waxyaalo saameyn weyn ku leh dadka waaweyn ayaan saameyn taas la mid ah ku laheyn caruurta. Haddii uusan cunuggaagu rabin inuu ka hadlo waxyaalaha qaarkood ama uusan u haysan inay saameyn ku leedahay, waa caadi oo dhib ma leh.
Wakhti qaadi aad ku daryeeshid naftaada, iyo baahiyaha jirkaaga iyo shucuurtaadaba. Adiga iyo waxa aad dareemaysidba waxaad tihiin muhiim.
Hoose waxaa ku qoran qaab aad isku daryeeli kartid/hawlo lala kaashado fiyoobida qofka:
Ahow qof fiyow jir ahaan iyo shucuur ahaanba; dhaqdhaqaaq iyo socod samee, oo tamarta kaa maqan dib u soo buuxi
Dadka kale la kaasho; ma ahan inaad keligaa wada sameysid
Samee wax ama hawl aad xiisaysid xilliga firaaqada ah
Ogow tabartaada, oo ha ka labalabeyn inaad dhahdo “maya” markii ay dantu kugu qasabto
Maanka ku haay waxa kaa farxiyo nolosha
Ilmahaaga waxaad ku arki kartaa calaamado ah inay jiraan wax dhibayo oo ay la harjadayaan. Dhaqamada hoos ku qoran ayaad ku arki kartaa durbadiiba ama maalmo ka dib, ama toddobaadyo ka dib, ama xitaa bilo ka dib markay ay wax dhacaan. Haddii dhaqamadaan ay raagaan ama ay ka sii daraan, la xiriir dhakhtarka caafimaadkaaga.
Harsan-waa, xanaaq, dhaqaan dagaal
Hurdada ama cunto-cunidda oo ku adkaato
Madax-xanuun, calool-xanuun, jir-xanuun
Bulshada oo uu ka dhex baxo
Qofkii oo maahsan
Cabsi iyo welwel aan la filaneyn
Inay u dhaqmaan qaab hoose oo aan u qalmin da’ooda
Inay ka fogaadaan qabashada hawlo ay xiisayn jireen
Macluumaad Dheeraad ah oo aad ku Caawin kartid Ilmahaaga:
Macluumaadka Caafimaadka Dhimirka (Mental Health Crisis):
Lifaaqyo ku Caawin karo:
Hambalyo, Ardayda Qalin-jebinayso!
Degmada SPPS waxay qabaneysaa qalin-jebin iyadoo kombiyuutarka la iska daawanayo si loo maamuuso ardaydeenna ka qalin-jebinayso 15 iskoollo oo ku yaalla degmada. Xafladahan qalin-jebinta waxaa si toos ah looga daawan karaa bogga intarnetkeenna, iyadoo ay weheliyaan farriimo fiidiyow ah oo ka yimid hoggaamiyayaal maxalli ah. Hambalyo dhammaan ardaydeenna qalin-jebinayso 2020!
Isbeddel ku yimid Xarumaha HealthStart Clinic
Xarunta caafimaadka ee Gordon Parks HealthStart Clinic way xirnaan doontaa illaa June 15. Xarunta caafimaadka ee Harding High School iyada maalinkaas ayaa dib loo furi doonaa. Muddada intaas ka horreysa, ardaydu waxay ballan ka qabsan karaan xarunta caafimaadka ee La Clinica ee ku taallo West Saint Paul ama ha wacaan khadka taleefanka caafimaadka (telehealth line) oo ah 651-412-8445.
Baajin - Kulankii Qoysaska iyo Dr. Gothard
Xushmad loo hayo George Floyd iyo xuskiisa maanta, waa la baajiyay kulankii kombiyuutarka la iska daawanayay ee Superintendent Joe Gothard, jadwalkiisuna ahaa caawo iyo 7:30 p.m. fiidnimo.
Maalinta ugu dambeyso Iskoolka
Maalinka iskoolka u dambeyso waa Talaadada, June 9 (ama July 29 iskoolka Crossroads). Sannad-dugsiyeedkii 2019-20 wuxuu ahaa mid aynaan hilmaami doonin. Fadlan naftiina daryeela, oo waxaynu kuu rajeyn fasax fiican jiilaalkan!